Fifanakalozankevitra an-tserasera: Ny anjara asan’ny fikatrohana nomerika ho an’ny fiteny ato anatin’ny Taompolo hoavy natao ho an’ny fiteny teratany manerana izao tontolo izao · Global Voices teny Malagasy
Voalahatra hatao ny Alakamisy 30 Jolay 2020 @ 11 maraina (mivantana Zoom sy Facebook)
Voadika ny 24 Jolay 2020 5:03 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Esperanto , عربي, English
Miangavy anao mba hanjohy anay mandritra ilay andiany faharoa amin'ireo fifanakalozankevitra atao an-tserasera izay ho afantoka amin'ny fomba ataon'ireo vondrompiarahamonina teratany ao Meksika sy Kanadà mba hanekena ny teknolojia sy ny aterineto ho toy ny fitaovana entina mampiroborobo sy manome aina vao ny tenindrenin-dry zareo ho entina manaso sy manakaiky ireo andiantaranaka vaovao mety hiteny azy.
Alakamisy 30 Jolay 2020 @ 11:00 maraina (CDT/Mexico City) – Azafady jereo eto ny famadihana ny ora ifampiresahana hifanaraka amin'ny firenena misy anao.
Fifampiresahana faha #2 – “Ny anjara asan'ny fikatrohana nomerika ho an'ny fiteny ato anatin'ny Taompolo Hoavy natao ho an'ny Fiteny Teratany manerana izao tontolo izao(2022-2032)” Ato misoratra anarana, azafady.
Nandritra ilay fihaonana vao haingana nataon'ny UNESCO tao Mexico City ho fanombohana ny drafitra ho an'ny Taompolo Erantany ho an'ireo Fiteny Teratany, ny iray tamin'ireo vondron'asa dia nafantoka tamin'ny anjara asan'ny teknolojia nomerika sy ny fampahalalambaovao teratany any ambanivolo. Naverina noraisina ihany koa io lohahevitra io nandritra ireo fifanakalozankevitra rehetra momba ny maha-zavadehibe ny fanakaikezana sy fampandraisana anjara an'ireo tanora, fanalahidy fototry ny fahaveloman'ny teny.
Tsy mitsahatra mitombo ny lanjan'ny anjara toerana raisin'ny fikatrohana nomerika ho an'ny fiteny ao anatin'ny tetikady erantany ho fanomezana aina vao ny fiteny. Mampiasa fitaovana nomerika ireo tanora ary mandray ny fomba fanao “ianao-ihany-manao-azy” mba hamoronany votoaty amin'ny fitenin-dry zareo sy hanakaikezany ny hafa. Ireo loharano an-dalam-pandrafetana, toy ny fehezam-pitaovana (toolkit) ho an'ny fikatrohana nomerika ho an'ny fiteny, dia iray amin'ireo fomba firoso entina manamafy ny fahaizan'ireo tanora mpitarika hitàna ny anjara asa fototra mandritra io taompolo hoavy io.
18 volana eo ho eo sisa mialohan'ny hanombohana ny Taompolo Erantany ho an'ny Fiteny Teratany sy ny fifantohana mitohy amin'ireo teknolojia nomerika sy ny aterineto, inona avy ireo tetikady ilaina mba hitondràna ny zavatra rehetra ho amin'ny dingana manaraka? Ahoana no fomba ahafahan'ireo mpiaro ny fiteny hifanome tànana am-pahombiazana amin'ireo mpandrafitra ny politika ka hisian'ny fiantraika azo tsapain-tànana?
Ny Rising Voices, hetsika iray an'ny Global Voices, ary iarahany miasa amin'ny Masoivoho Kanadiàna ao Meksika, no mikarakara ity andiany ity, miaraka amin'ny fandraisana anjara manokan'ny UNESCO ao Meksika.
Fanamarihana: fandikàna mivantana ho amin'ny fiteny (anglisy / espaniôla) azo raisina mandritra ny resadresaka ifanaovana ao amin'ny Zoom.
Azafady, araho ny fifanakalozankevotra ao amin'ny Twitter, ampiasàna ny tenifototra #ExchangesCAMX (Anglisy) ary #IntercambiosCAMX (Espaniôla).